Tao amin’ny fokontany Andatsadrano, distrikan’i Soanierana Ivongo, faritra Analanjirofo no nitrangan’izany, tokony ho tamin’ny 06 ora latsaka folo hariva. Araka ny fanazavana voaray tany an-toerana, dia nandrandraina volo tao an’efitra izy mianadahy ireto no nihotsaka tampoka ny tany, ka tototra tao izy ireo. Vokatry ny rotsak’orana tsy niato no nahatonga izany. Variana nahandro sakafo tao an-dakozia ny ray aman-drenin’ireto zaza ireto. Ireto farany, tao amin’ny efitra nisy azy ireo, no nianjera tampoka ny rindrina ka nanototra azy ireo. Niezaka ny nanavotra azy mianadahy moa ny olona teo amin’ny manodidina sy ny ray aman-dreniny, saingy, tsy tana intsony ny ain’izy mianadahy. Natao ny fizahana sy ny fitiliana ary nomena ny fianakaviana ny razana taorian’ny fizahana.
Sitraka r sy Pati